Ederede Grace Carter na Martech Zone |
Edemede site na Grace Carter
Grace Carter bụ onye edemede edemede na Ọmụmụ ihe na Onye Unechi ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ na mmelite ntụgharị ma na-amalite usoro ịzụ ahịa. Ọzọkwa, Grace bụ onye nkụzi na Aka Enyemaka Psychology agụmakwụkwọ website.
7 Ecommerce Ndụmọdụ Maka Creatmepụta Ọdịnaya nke Na-atọghata
Thursday, July 19, 2018 Wednesday, July 18, 2018 Grace Carter
Site na ịmepụta ndị mmadụ na-ahụ ihe na-atọ ụtọ ma dị mkpa, ị nwere ike ịkwalite ọhụhụ saịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ Google. Ime nke ahụ ga - enyere aka idozi gị maka mgbanwe ụfọdụ. Mana naanị ịle ndị mmadụ anya na ngwongwo gị anaghị ekwe gị nkwa na ha ga-eme ihe ma nye gị ntụgharị. Soro ndụmọdụ ecommerce asaa a maka imepụta ọdịnaya tụgharịrị. Mara Onye Ahịa Gị ịmepụta ọdịnaya nke na-atọghata ị ga-achọ ịnwe ezigbo echiche nke ihe gị